राहत वितरणमा पक्षपात एवम् अनियमितता गर्नेलाई कारबाही ! | Janakhabar
राहत वितरणमा पक्षपात एवम् अनियमितता गर्नेलाई कारबाही !
काठमाडौं, १७ वैशाख । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कोरोना भाइरसको महामारीले नेपाली जनताको जीवनमा निम्त्याएको महासङ्कटबाट नाजायज फाइदा उठाउन दुस्साहस गर्ने भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, कालोबजारी र राहत वितरणमा पक्षपात एवम् अनियमितता गर्नेहरूलाई सशक्त कारबाही गर्ने उदघोष गरेको छ । सो पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले एक लेखमार्फत सो उदघोष गरेका हुन् । प्रवक्ता प्रकाण्डले देशको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको निकाय र प्रमुख व्यक्ति गुण र दोषको भागीदार हुन्छ नै भन्दै राज्यको कार्यकारी निकाय र त्यसको प्रमुखको नाताले केपी वलीले देशमा कोरोना भाइरसका विरुद्ध लड्ने सवालमा भएका अपूर्णता र गल्तीहरूको जिम्मेवारी लिनै पर्ने बताउदै समस्याको प्रमुख कारण देशमा विद्यमान राज्यसत्ता र शासन व्यवस्थामा रहेको ठोकुवा गरेका छ्न ।
प्रवक्ता प्रकाण्ड्को लेखमा भनिएको छ – ” विगत दुई महिनादेखि नेपाली जनता कोरोना भाइरसको महामारीसंग जुधिराखेको छ । आजका दिनसम्मको अवस्थालाई हेर्दा यसको नियन्त्रण र निर्मूल चुनौतीपूर्ण नै देखिएको छ । भैराखेका सरकारी प्रयासहरूको अपर्याप्तता र कमजोरीप्रति आमनेपाली जनताको आक्रोश, आलोचना र विरोध बढ्दो मात्रामा छ । यही बेला सरकारी पार्टी र सरकारभित्रको अन्तरविरोध ‘सत्ता सङ्घर्ष, स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार, अध्यादेश र अपहरण प्रकरण’ भएर विस्फोट भएको छ । विदेशी शक्तिहरूको खेल पनि यी प्रकरणहरूमा समावेश भएको छ । यसले नेपाली जनतालाई थप पीडित र कोरोना भाइरसका विरुद्धको सङ्घर्षलाई कमजोर मात्र वनाएको छैन, विषयान्तर गर्ने षड्यन्त्र पनि अन्तरनिहित रहेको छ । यतिमात्र नभएर यो खेल त सरकारी नेकपाका नेताहरू र सरकारको नेपाली जनताको जीवनमाथिको खेलबाड, गैरजिम्मेवारपन र अक्षम्य अपराध हुन गएको छ । सङ्कटावस्थामा अन्य बखेडा नझिकीकन सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध बनाएर कोभिड १९ रोगका विरुद्ध केन्द्रित हुन जरुरी छ । यसका निम्ति निम्नकार्यहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढाउन आवश्यक छ : -
कोरोना भाईरस नयाँ प्रजातिको भाइरस हो । आफ्नो सापेक्षतामा हालसम्मका यस प्रकृतिका भाइरसहरूमा यो प्राणघातक र तीव्र आक्रामक चरित्रको छ । झन्डै ५ महिनामै विश्वव्यापी रूप लिनु, लाखौँलाख मानिसहरूलाई सङ्क्रमित गर्नु र हजारौँहजार मानिसहरूको छिनभरमै ज्यान लिनुले यसको पुष्टि गर्दछ । जारी वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानका बाबजुद यसको निर्मूल तुरुन्तै हुने देखिँदैन । यसलाई निर्मूल पार्न त स्वास्थ्य विज्ञानमा नयाँ अनुसन्धान र विकास जरुरी हुन गएको छ । स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूले ढिलो नगरी आफूलाई यो संवेदनशील र महान् कार्यमा शीघ्रातिशीघ्र केन्द्रित गर्नु पर्दछ । नियन्त्रण तथा रोकथामको कार्य भने तात्कालिक कार्यभार बन्न गएको छ । यस कार्यमा नेपाली श्रमजीवी जनताको पार्टी हुनुले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै दृष्टिले ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण हुनेछ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट चिन्तित, निराश र आतङ्कित भएर स्वास्थ्य र जनजीवनमा नकारात्मक असर पर्न गएका आमनेपाली जनतामा पुगेर जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, कोरोना भाइरससम्बन्धी स्वास्थ्य नियम एवम् अनुशासन पालना गर्न अभिप्रेरित गर्ने, समस्यामा परेका जनतालाई मद्दत गर्ने, घर एवम् गाउँलाई एकान्तबासका रूपमा विकास गर्न जनताको नेतृत्व गर्ने, जनतासँग एकाकार हुने र जनसम्बन्ध थप सुमधुर बनाउन सिङ्गो पार्टीपङ्क्तिलाई विशेष आह्वान गर्दछौँ । महामारीले निम्त्याएको महासङ्कटको साहस, विवेक, धैर्य र आत्मअनुशासित भएर सामना गर्न आमनेपाली जनतामा हाम्रो पार्टी विशेष अपिल गर्दछ ।”